Yeyiphi i-ultrabook yokuthenga ukufaka Ubuntu | Ubunlog
Yeyiphi i-ultrabook yokuthenga ukufaka Ubuntu
UJoaquin Garcia | | Tutorials, Ubuntu
Ubuntu ibe yenye yezona ndlela zithandwa kakhulu phakathi kwabasebenzisi abafuna ukutshintshela iWindows okanye iiMacOS kwiGnu / Linux. Ukusebenziseka kwayo kunye nesoftware yayo yangoku yenza izigidi zabasebenzisi abasebenzisa Ubuntu okanye iincasa zayo ezisemthethweni kwiikhompyuter zabo.
Kodwa ayizizo iikhompyuter ezilula esiza kuzihlalutya kodwa endaweni yoko zinqabile kodwa zithandwa kwiinyanga ezidlulileyo, into efana naleyo iveliswe ngu-Ubuntu kwilizwe le-Gnu / Linux, ezi khompyuter zibizwa ngokuba zii-Ultrabooks.
Ii-Ultrabooks ziincwadana zamanqaku ezinobunzima obungaphantsi kwe-1 kilogram kodwa abazinciphisi izibonelelo zabo kodwa ngokuchaseneyo. Yiyo loo nto ii-ultrabooks Baneeprosesa ezinamandla, isixa esikhulu sokugcinwa kwangaphakathi, ukupholisa nje kunye neeyure kunye neeyure zokuzimela.
Okulandelayo siza kuthetha nawe malunga neemfuno okanye izixhobo zekhompyutha Yintoni esifanele siyijonge xa ​​sifuna ukuthenga okanye ukufumana i-ultrabook yokufaka Ubuntu. Nokuba ifakwe okanye ayifakwanga ngokungagqibekanga.
1 I-CPU kunye ne-GPU
4 Idiski ye-SSD
8 Ukukhetha eyokuthenga kwi-ultrabook
9 Kwaye yeyiphi i-ultrabook onokuyikhetha?
I-CPU kunye ne-GPU
Kufuneka sitsho ukuba i-CPU khange ibe yingxaki enkulu ukufaka Ubuntu kwikhompyuter, ngokuchaseneyo. Kodwa emva kweendaba zamva nje malunga nokwakhiwa kwe-32-bit, ii-ultrabooks ezine-core-core okanye i-32-bit processor ubuncinci ukhetho lokugqibela ekufuneka silukhethile xa uthenga i-ultrabook ye-Ubuntu. Andikuthandi ukuzithetha ezi zinto, kodwa kuyinyani ukuba ii-Intel CPU zilunge ngakumbi kwiilaptops kunee-CPU ze-AMD, ke Iiprosesa ze-i5, i3 okanye i7 iya kuba lukhetho olufanelekileyo kwi-ultrabook kwaye iyahambelana noBuntu.
Ngokubhekisele kwiGPU okanye ikhadi lemizobo (elona gqala liligqala), ayizizo zonke ezifanelekileyo ukufaka kunye / okanye ukusebenzisa Ubuntu. Imicimbi yokuqhuba yeNvidia yakutshanje yenza i-AMD ye-ATI kunye ne-Intel GPU lolona khetho lufanelekileyo ku-Ubuntu. Abaqhubi bezi mveliso basebenza ngokuchanekileyo kwaye kakuhle kakhulu noBuntu kodwa kuyinyani ukuba iiNvidia GPU zinamandla.
Inkunzi yegusha akufuneki ibe yingxaki yokufaka Ubuntu kwi-ultrabook. Ubuntu ayidli kakhulu kwinkumbulo yegusha kwaye kwimeko yokungabinakho okwaneleyo kuhlobo oluphambili, sinokusebenzisa iidesktops ezikhanyayo ezinjengeLxde, Xfce okanye Icwm. Ngayiphi na imeko, ukuba sifuna i-ultrabook yethu ibe nohlobo oluphambili lwe-Ubuntu iminyaka, kufuneka okungenani sibe ne-8 Gb yenkunzi yegusha okanye ngaphezulu. Ukunyuka kobungakanani, kokukhona iminyaka yobomi isebenza ngokugqibeleleyo. Kufuneka siqaphele ukuba unendawo yememori yenkunzi yegusha yasimahla, Oku kuyakwandisa amathuba okuba i-ultrabook inobomi obude, nangona zimbalwa iimodeli ezinikezela ngezi zinto zinokwenzeka.
Isikrini yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwilaptop, nokuba yi-ultrabook, netbook okanye ilaptop eqhelekileyo. Ubungakanani obuqhelekileyo bescreen se-ultrabook zii-intshi ze-13. Ubungakanani obunomdla obenza ukuba ikhompyuter ibenokuphatheka ngakumbi kunangaphambili, kodwa ubungakanani obuqhelekileyo be-intshi ezi-15 iseyinto elungileyo. Kule meko, khetha Iscreen esinetekhnoloji ye-LED lukhetho olunconyelwe kakhulu, ubuncinci ukuba sifuna i-ultrabook yethu ibe nokuzimela okukhulu.
Ubuncinci besisombululo sescreen iya kuba ziiphikseli ezingama-1366 × 768 okanye nangaphezulu. Itekhnoloji yokuchukumisa iyahambelana noBuntu, oko kukuthi, sinokuba nescreen sokuchukumisa uBuntu nangona kuyinyani ukuba inkqubo yokusebenza kweCanonical ayinayo le teknoloji iphucukileyo, kwaye isoftware yemizobo njengeWayland. Ngayiphi na imeko, indlela eqhelekileyo isebenza ngokugqibeleleyo.
Ukuba sifuna ukuba ne-ultrabook enkulu ene-Ubuntu Kuya kufuneka sijonge iqela elinediski ye-ssd. Ukusebenza kwe-SSD hard drive kuyamangalisa, ubuncinci xa kuthelekiswa nokuqhutywa kwendabuko, kwaye Ubuntu iyahambelana ngokupheleleyo nale teknoloji. Kodwa, mna ndincoma ngokukhetha i-ssd ye-hard drive ukhetho, kuba kukho ii-ultrabooks ezinesisombululo esixubileyo esikuvumela ukuba ube nokugcina ngaphakathi okukhulu, kodwa ukusebenza kubi kakhulu. Umthamo ekufuneka sinayo ngokwe-hard disk kufuneka ube malunga ne-120 Gb, indawo encinci ayonelanga ukugcina amaxwebhu akho kunye neefayile ze-Ubuntu.
Zombini Iitekhnoloji zisebenza ngokuchanekileyo ku-Ubuntu, kodwa eyokuqala isebenza ngakumbi kunesibini kwaye inika inkululeko enkulu.
Ibhetri yindawo ebalulekileyo ye-ultrabook kunye nayiphi na ilaptop. Kakhulu kangangokuba Ubuntu ibonelela ngolawulo olukhulu lwamandla, ukubonelela ngeeyure ezingaphezulu kweenkqubo zokusebenza ezizizo. A I-60 Whr ibhetri ingaphezulu kokwaneleyo ukubonelela ngeeyure ezili-12 zokuzimela, nangona yonke into izakuxhomekeka ekusetyenzisweni kweqela. Nantsi into efanayo ayinamsebenzi nokuba sisebenzisa Ubuntu okanye iiWindows, ukuba sisebenzisa usetyenziso olisebenzisa izixhobo, luya kusebenzisa ibhetri engakumbi kwaye ngokwandisa siya kuba nokuzimela okuncinci.
Ukugcina iiyure ezili-12 zokuzimela Kuya kufuneka siqiniseke ukuba unxibelelwano esingalusebenzisi (I-NFC, iBluetooth, ngaphandle kwamacingo, njl ...) ikhubazekile. Ukutshajiswa kwee-smartphones kunye neetafile kufuneka kungasebenzi kwisixhobo okanye akufuneki kuba oko kuya kunciphisa ukuzimela kwesixhobo.
Ngokubanzi, ii-ultrabooks zinenani eliqingqiweyo lamazibuko e-USB kunye neendawo zokubeka, ezilungileyo kuba zonyusa ukuzimela kwezixhobo kwaye nkqu singazenza zingasebenzi izinto ngo-Ubuntu ukuze zicinywe xa singazisebenzisi kwaye ubomi obude bebhetri bugcinwa.
I-Ultrabooks zihlala zingenazo izibuko ezininzi zobuchwephesha okanye idrive ye-DVD-ROM, ezenza ukuba zibumbane ngakumbi, zikhanyise, kwaye zinokuzimela. Kungenxa yoko le nto kufuneka sijonge ngocoselelo kwiindidi ezahlukeneyo zonxibelelwano enalo. Ubuncinci zibuko ezimbini ze-USB ziyafuneka kunye nonxibelelwano olungenazingcingo. Ukuba sifuna ukuba ne-ultrabook enamandla nge-Ubuntu Kuya kufuneka sibe nonxibelelwano lweBluetooth, i-NFC, amazibuko e-USB kufuneka abe luhlobo C kwaye ubuncinci babe nendawo yokubeka amakhadi emicrosd. Iikhompyuter ezininzi ziyahlangabezana nale ndawo kwaye ziyahambelana noBuntu.
Ixabiso le-ultrabooks liphezulu kakhulu, nangona kufuneka sivume ukuba ixabiso labo eliphakathi lehle kakhulu kwiinyanga ezidlulileyo. Ngoku sinokufumana I-ultrabook elungileyo ehambelana noBuntu nge-800 euros. Kuyinyani ukuba kukho iindlela ezibiza kakhulu ezinje ngeDell XPS 13 edumileyo enexabiso elingaphezulu kwe-1000 euro, kodwa sikwafumana ii-ultrabooks ezinjengezo ze-UAV ezingafikeleli kwi-700 euros. Kwaye ngokungafaniyo nezinye iinkqubo zokusebenza, kukho ii-ultrabooks ezithengiswa ngo-Ubuntu njengenkqubo yokusebenza engagqibekanga ngaphandle kokuphakamisa ixabiso lezixhobo. Ngayiphi na imeko, ukuba sikhetha i-ultrabook eneWindows asinakukhathazeka emva koko Ukufakwa kobuntu ilula kakhulu kolu hlobo lwesixhobo.
Ukukhetha eyokuthenga kwi-ultrabook
Zininzi ngakumbi iimodeli ze-ultrabook ezine-Ubuntu. Kwi Indawo esemthethweni Ubuntu Singafumana uluhlu lweenkampani ezinikele kwiCanonical yokuphuhlisa izixhobo ezihambelana ne-Ubuntu. Kwakhona, kwifayile ye- Indawo yeFSF Siza kufumana i-Hardware exhasa okanye enabaqhubi basimahla kwaye iyahambelana ke noBuntu. Ukuba sishiya ezi zikhombisi zimbini kufuneka sithathele ingqalelo ii-ultrabooks zokuqala ezine-Ubuntu. Inkampani yokuqala ukubheja kuyo yayinguDell, eyaqala ukuphuhlisa iDell XPS 13, i-ultrabook ene-Ubuntu njengenkqubo yokusebenza emiselweyo. Nangona kunjalo, ixabiso lezi zixhobo laliphezulu kakhulu kwaye lalingafumaneki kuye wonke umntu, nangakumbi xa ii-ultrabooks zazingathandwa kangaka.
Emva kwexesha, iiprojekthi zazalwa eziguqula i-Macbook Air ibe yi-ultrabook ene-Ubuntu, engacetyiswanga kwimbono yam ngenxa yezinye iindlela ezikhoyo.
Ii-Ultrabooks zikwabonakala ziza neWindows kodwa zihambelana ngokupheleleyo noBuntu njenge-Asus Zenbook. Impumelelo yezi ultrabooks yenza ukuba iinkampani ezincinci zibheje ku-Ubuntu njengenkqubo yokusebenza kwizixhobo zazo, ngokunjalo Inkqubo ye-76 kunye neSlimbook zenze ii-ultrabooks ezihambelana neGnu / Linux kunye Ubuntu. Kwimeko yeSystem76 sinokubheja kwakho okuyingozi ngokwenziwa kwenguqulelo epheleleyo yeUbuntu yeekhompyuter zakho.
Kwimeko yeSlimbook, benze i-Katana kunye ne-Excalibur, ii-ultrabooks ezihambelana ngokupheleleyo no-Ubuntu kwaye eza ne-KDE Neon njengenkqubo yokusebenza emiselweyo. Kukho inkampani VANT, yemvelaphi yaseSpain njengeSlimbook enikezela ngee-ultrabooks nge-Ubuntu ngamaxabiso afanelekileyo. Ngokungafaniyo neSlimbook, VANT ineemodeli ezininzi ze-ultrabook ezinezixhobo ezilungelelanisiweyo.
Kwaye yeyiphi i-ultrabook onokuyikhetha?
Okwangoku, ngokuqinisekileyo uya kuzibuza ukuba yeyiphi i-ultrabook endiya kuyikhetha. Zonke iinketho zilungile, yiza noBuntu okanye iiWindows. Ngokubanzi, naluphi na ukhetho lulungile ukuba sithathela ingqalelo ingcebiso yenqaku ngalinye. Ngokwam Andizukwenza utshintsho kwiMacbook Air kuba ukuba sithenga esi sixhobo kufuneka sibe neMacOSKe ngoko, kungcono ukhethe enye i-ultrabook kunokuchitha imali kwikhompyuter efana neMacbook Air kwaye emva koko ususe isoftware yayo.
Uninzi lwewebhusayithi ezihlaziya izixhobo zithetha kakhulu ngezixhobo ze I-Slimbook kunye ne-UAV, izixhobo zayo zintle kakhulu nangona ndingakhange ndivavanye buqu kwaye ziinkampani ezizinikele kwiSoftware yasimahla, ezenza ukuba izixhobo zazo zibe nenkxaso enkulu. Kodwa ukuba imali yeyona nto iphambili ekubeni ne-ultrabook ene-Ubuntu, ukhetho lwe-ultrabook enewindows emva koko ufake Ubuntu kuyo ingaphezulu kokucetyiswayo.
Njengoko ubona, ii-ultrabooks kunye ne-Ubuntu zihamba kakuhle, nangona abanye abasebenzisi beWindows bengafuni ukuyamkela. Kodwa Yeyiphi i-ultrabook onokuyikhetha? Ngaba unayo i-ultrabook ene-Ubuntu? Athini amava akho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Yeyiphi i-ultrabook yokuthenga ukufaka Ubuntu
Ndingongeza ukuba kukhetho lwendawo yedesktop, i-PLASMA 5, okwangoku i-5.12.5 iphuculwe kakhulu kwaye iphantse yahambelana nokusetyenziswa kwememori kunalezi desktops sele zikhankanyiwe, ukuqala inkqubo malunga ne-450Mb ye-RAM.
Akukho nto yokwenza nokusetyenziswa kwememori ephezulu yohlobo lwayo 4.
UJoan Francesc sitsho
Ewe, ndinayo iSlimbook: https://slimbook.es/ kwaye ndonwabile kakhulu.
Phendula kuJoan Francesc
U-Luis Eduardo Herrera sitsho
I-ASUS Zenbook iyahambelana ngokupheleleyo noBuntu. Kwimeko yam ethile, ene-SSD encinci yenkqubo yokusebenza kunye ne-HD enkulu yamaxwebhu, njl njl. I-boot iyakhawuleza kwaye akukho ngxaki kubaqhubi okanye ukungahambelani.
Phendula uLuis Eduardo Herrera
NdineSlimbook Katana II kwaye ndonwabile kakhulu 🙂
Ndine-asus ux501 kwaye ayinakufaka ubuntu 18.04. Olona hlobo kuphela lwe-Ubuntu ekuvumela ukuba uyifake yi-15.10, ukusuka apho uqala uhlaziye ude ufike kuhlobo lwe-18.04 (kwimeko yam ndiyayihlaziya ndishiya umanyano njenge desktop).
Kulabo bafuna ukuyifaka, banokuyifaka kwenye ilaptop okanye ilaptop emva koko bayikope okanye batshintshe idiski kwi-Asus Zenbook.
Ibhotile yePepe sitsho
Ukusuka kumava am ukuba ufuna ukuthumela ilaptop kwinkonzo yobuchwephesha kaninzi, zithengele islimbook, ngaphandle kwamathandabuzo ...
Phendula Pepe Botella
UJuan Alca sitsho
Phendula uJuan Alca
Ewe, kwiphepha likaDell yiXPS 13, ene-Ubuntu efakwe ngaphambili. Ndizivile izingqinisiso ezilungileyo kwesi sixhobo, zilula kwaye zinamandla.
Inqaku alilunganga, kodwa ulibale ukukhankanya i-UAV kunye neSlimbook… kumxholo ophambili. Intengiso "exhaswe ngeposi" nayo ngekhe yenzakalise.
Apha ngumoya weXiaomi 12,5 onwabile ngo-Ubuntu 18.04
Ufuna 1 kwaye akusekho. Banokuphela kwe-1 ultrabook kwaye ibhetri ihlala iiyure ezi-3 okanye ngaphantsi.
Ndidla ngokukhetha ukuthenga kwiinkampani zaseSpain ngenkxaso, kodwa kule meko abathathi ntlawulo kuba besithi kuyinto eqhelekileyo ukuba ibhetri ye-ultrabook yabo kuphela ihlala iiyure ezi-3
Umhlobo ogqwesileyo wesalathiso, ngokunxulumene nenkunzi yegusha, kwaye ufunde amanye amanqaku ngendlela yokukhetha ilaptop okanye i-ultrabook kwaye azichazwanga kangako xa zisithi 8 okanye nangaphezulu ukuba ufuna iqela lihlale ixesha elide lihamba kakuhle kwiinguqulelo ezintsha ze-Ubuntu ,
Buyintoni ubomi bobomi kunye nebhetri yeencwadana ezenzelwe iLinux?
Ndibeka la magqabantshintshi ngokwahlukeneyo, kuba ndifuna ukwazi ukuba umba wokuphelelwa lixesha ucwangcisiwe ungakanani kwezo zinto zijolise kwisoftware yasimahla.
Enye yeengxaki eziphambili kwiincwadana zokubhalela kukuba ibhetri ine-chip echaza ukuba ibhetri inexabiso elincinci, ngokungathandekiyo ibhetri yokuqala ihlala malunga neminyaka emi-2, kodwa ezi zinokufunyanwa kamva azihlali kwinyanga ezintandathu.
Ukuba unesidingo esibi sokuba iphatheke, kuya kufuneka uthenge enye.
Andazi ukuba kwenzeka into enye na kwiincwadana "ezikhanyayo" ezinebhetri ngaphakathi, kodwa ukuba zine-chip, kunokwenzeka ukuba banike ingxelo ngentlawulo esezantsi kuphela esekwe kwikhawuntara, ezinjengeekhatriji zeprinta ukuze azinako ukuzaliswa, njl.
Omnye umthombo wokungaphumeleli kokucwangciswa kwe-obsolescence yi-chip soldering.
Isizathu sokuba ukukhokela kungcolisa kakhulu, kwagxotha amaRoma, khawufane ucinge!
Ngesi sizathu bekungavunyelwanga, kwaye ngoku iichips zithengiswa zii-alloys ezisemgangathweni ezihlala ixesha elincinci, zenza ukuba ubomi besixhobo bufutshane kwaye ke oko kuvelise inkunkuma eninzi. Oko, ewe, ukungcolisa okuncinci kuncinci kwaye akunakusebenziseka kwakhona. Wenza njani lo mthetho kwimithetho ephethwe kumaqela e-EU?
Ndiyayithiya ipads enkulu okanye iphedi yokuchukumisa. Abonwabanga kwaphela, xa ungabachukumisi ngempazamo ngokuchwetheza, isikhombisi sitshintsha indawo nokuba simakishe kwaye sicime into ebhaliweyo. Kukuphi ukuchitha ixesha ulungisa utshintsho kwaye ujonge ukuba akukho nto ilahlekileyo (okanye kukho into eshiyekileyo esuswe ngenjongo).
Uziva njani ngoyilo lwe-ergonomic yeencwadana zakho zeLinux?
UJorge Ortiz sitsho
Ndine-raspberry pi 3 B + kwaye ndonwabile kakhulu, ndisebenza ngokutyibilikayo kuyo. I-NOOB isebenzisa izixhobo ezimbalwa kakhulu.
Phendula Jorge Ortiz
Kwimouse kunye nokukhetha iphedi yokuchukumisa ungenza umsebenzi xa uthayipha kwikhibhodi, ipaneli yokuchukumisa ayisebenzi ixesha elide ucinga ukuthintela ukucofa ngengozi.
Ndisebenzisa iXiaomi Mi Notebook Air 13.3 (2017) phantsi kweLinux Mint 19.1 eneCinnamon, kunye nekhibhodi yesiNgesi kunye nepaneli enkulu yokuthinta kunye neengxaki eziyi-0 zero xa usebenza iiyure ezisi-8 ngosuku 😀
Eyona nto intle kunayo yonke. Iya ngathi kukudubula: O
Phendula ku Doest
Kudala ndisebenzisa uDell iminyaka, nokuba kukwidesktop okanye ilaptop kunye nokuhambelana okuhle. Kudala ndisebenzisa ii-laptops ezi-2 ze-Acer ngoku: enye ine-AMD kunye neRadeon, kufanelekile ukuba ibe ngumdlalo weqonga. Kwaye enye ine-Intel i7 8550u, iNvida (andikhumbuli ngemodeli).
I-Intel, indivumela kuphela ukuba ndifake * i-buntu. Nge-fedora kunye ne-openuse, ufakelo alugqibi kwaye ukuba ndiyaluqala kwakhona ndizama ukungena kwinkqubo entsha, iqala ukusebenzisa yonke iprosesa kunye nelaptop ebandayo. Kodwa ndonwabe kakhulu ngo-Kubuntu ukusukela nge-18.04, ngoku eyi-18.10. Ngapha koko, ukuba nabani na uyazi ukufaka i-Fedora, ndingayivuyela loo nto.
Nge-AMD ndiyisebenzisa ngeWindows kunye noBuntu.
Ndine slimook kwaye ndonwabile kakhulu. Kuyo ndineArch linux
Molo, ndine-Asus ZenBook UX410 ene-i5 iminyaka emi-3, kuqala nge-Ubuntu 16 kwaye ngoku ine-Ubuntu 18 kwaye ihamba kakuhle. Ndiyayithanda kakhulu kangangokuba ndathenga nje intombi yam inguqulelo yangoku ye-UX410UA efanayo kodwa nge-i7 kwaye isebenza kakuhle. Ndinazo zombini ngeeklasikhi zeGnome zakudala kwaye zihamba kakuhle kakhulu kuzo zonke iinkalo, kubandakanya ubomi bebhetri.
JMeter, yenza iimvavanyo zomthwalo kunye nokulinganisa ukusebenza kwi-Ubuntu
Nguwuphi umfundi we-pdf oza kusetyenziswa kwidesktop nganye ku-Ubuntu?